Fibromyalgia | La-talin - Sabab - Calaamadaha - Daaweynta - Jimicsiga & Jimicsiga
Fibromyalgia waa xaalad caafimaad oo lagu garto xanuun daba dheeraada, xanuun baahsan iyo dareenka cadaadiska oo kordha maqaarka iyo murqaha. Fibromyalgia waa xaalad aad u shaqeyneysa. Sidoo kale waa wax iska caadi ah in qofka uu ku dhaco daal, dhibaatooyinka hurdada iyo dhibaatooyinka xusuusta.
Calaamadaha si weyn ayey u kala duwanaan karaan, laakiin astaamaha lagu garto waa xanuun weyn iyo xanuun gubanaya murqaha, ku xirnaanta muruqyada iyo kala goysyada. Waxaa loo kala saaraa mid cilad jilicsan xididada.
Sababta loo yaqaan 'fibromyalgia' lama yaqaan, laakiin daraasadihii ugu dambeeyay waxay soo jeediyeen inay noqon karto epigenetics iyo hiddo-wadeyaal sababa cillad maskaxeed. Waxaa lagu qiyaasaa in ilaa 100000 ama in ka badan uu saameeyo fibromyalgia ee Norway - sida ku cad tirokoobyada Ururka Fibromyalgia ee Norway.
Sidoo kale hoos ugu rog qodobka qodobka loogu talagalay si aad u daawato fiidiyow tababbar ah oo loogu talagalay kuwa qaba fibromyalgia.
Waa in diirada la saaraa cilmi baaris loogu talagalay xaalada saameysa dad aad u badan - waa sababtaas awgeed waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad maqaalkan la wadaagto warbaahinta bulshada, doorbideyna boggayaga Facebook oo waxaad dhahdaa: "Haa cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan fibromyalgia". Sidan ayaa qofku ka dhigi karaa 'cudurka aan la arki karin' si muuqata oo muuqata.
Sidoo kale aqri: - 6 Layliyo loogu talagalay kuwa qaba Fibromyalgia
Ku dhaco? Ku biir kooxda Facebook «Rheumatism - Noorwey: Daraasad iyo warar»Wixii ku saabsan cusboonaysiinta ugu dambeysa ee ku saabsan baarista iyo qorista warbaahinta ee ku saabsan ciladdan Halkan, xubnuhu sidoo kale waxay ka heli karaan caawimaad iyo taageero - wakhti kasta oo maalinta ah - iyadoo la adeegsanayo isweydaarsiga khibradahooda iyo talooyinkooda.
Fibromyalgia - qeexitaan
Fibromyalgia wuxuu ka yimid Latin. Meesha 'fibro' lagu turjumi karo unugyada buurnaanta leh (unugyada isku xira) iyo 'myalgia' waxaa lagu turjumi karaa murqo xanuun. Qeexitaanka fibromyalgia ayaa sidaas noqda 'murqaha iyo isku xirnaanta xannuunka'.
Kumaa ku dhacay fibromyalgia?
Fibromyalgia badanaa waxay ku dhacdaa dumarka. Waxaa jira saamiga 7: 1 ee udhaxeeya haweenka iyo ragga ay dhibaatadu saameysey - taas oo macnaheedu yahay in dumarka labanlaab ka badan dumarka ay saameeyeen ragga.
Maxaa sababa fibromyalgia?
Wali ma aad ogtahay sababta dhabta ah ee fibromyalgia, laakiin waxaad leedahay dhowr aragtiyood iyo sababaha suurtagalka ah.
Hidaha / Epigenetics: Daraasaduhu waxay bixiyeen caddeyn ah in fibromyalgia ay badanaa ku sii jirto qoysaska / qoysaska waxaana sidoo kale la arkay in saameynta dibedda sida walaaca, jahwareerka iyo infekshannada ay sababi karaan ogaanshaha fibromyalgia.
- Jawaabta fibromyalgia ma tahay qarsoodiga hidde sideena?
Dhaawac / dhaawac / caabuq: Waxaa lagu dooday in fibromyalgia laga yaabo inuu xiriir la leeyahay dhaawacyada qaarkood ama ogaanshaha cudurka. Xanuunka garabka, Arnold-Chiari, stenosis makaanka afkiisa, larynx, mycoplasma, lupus, fayraska Epstein Barr iyo caabuq ku dhaca neef-mareenka ayaa dhammaantood loo tixraacay sababaha suurtagalka ah ee fibromyalgia.
Sidoo kale aqri: - Fibromyalgia Waxaa Sabab U Noqon Kara Maskaxda Maskaxda
Waa maxay calaamadaha caadiga ah ee fibromyalgia?
Xanuun muhiim ah iyo astaamaha lagu garto sida murqaha oo adkaada, daal / daal, hurdo xumo, awood la’aan, dawakh, madax xanuun iyo calool xanuun.
Sidii aan soo sheegnay, waxaa sidoo kale jiray warbixino sheegaya in dadka ay saameeyeen fibromyalgia inta badan la il daran yihiin dhibaatooyinka xusuusta, calaamadaha lugta aan nasaneynin, codka iyo dareenka iftiinka, iyo sidoo kale qaar ka mid astaamaha neerfaha. Cudurka ogaanshaha waxaa badanaa la xiriira niyad-jabka, walwalka iyo xanuunka 'post-traumatic stress syndrome'.
Sidee cudurka loo yaqaan 'fibromyalgia'?
Markii hore, ogaanshaha waxaa lagu sameeyay iyadoo la baarayo 18 qodob oo gaar ah oo jirka ka mid ah, laakiin habkan ogaanshaha ayaa hadda la tuuray. Iyada oo ku saleysan in aysan jirin baaris gaar ah oo lagu ogaanayo, waxay badanaa ku saleysantahay ka saarida cudurada kale iyo sidoo kale ku saleysan astaamaha astaamaha / calaamadaha caafimaad.
Baadhista meelaha xanuunku ku yaallo ee jirka?
Cilmi-baaristii ugu dambeysay, oo lagu daabacay joornaalka 'Rheumatology Clinical' (Katz et al, 2007), waxay diidaysaa aragtida qodobbada xannuunku inay yihiin qiimeyn lagu ogaanayo, maaddaama ay ku soo gabagabeeyeen in dadka badankood ay sidoo kale la kulmaan xanuun ku saabsan qodobbadan. Waxaa sidoo kale la rumeysan yahay inay si khaldan u tarjunto xanuun daran oo xagga nolosha ah sida fibromyalgia.
Daaweynta fibromyalgia waa mid aad u dhib badan. Tani waa sababta oo ah xaaladdu waa mid is bedbeddelaysa dadka dhexdeeda waxayna badanaa la xiriirtaa dhowr xaaladood oo kale. Daaweyntu waxay ka koobnaan kartaa daawo, isbeddelada qaab nololeedka, daaweynta jireed iyo daaweynta garashada - inta badan habka isku dhafan.
Dadka qaar waxay la kulmaan horumar ku yimaada astaamaha 'fibromyalgia' iyagoo isbeddelo ku sameeya cuntadooda. Tani waxay ku lug yeelan kartaa ka fogaanshaha, tusaale ahaan, aalkolada, waxyaabaha caanaha laga sameeyo iyo / ama gulutada.
Aad ayey faa'iido ugu leedahay qofka qaba dhibaatada fibromyalgia oo uu helo caawinaad si loo ogaado jimicsiga ugu fiican iyaga. Dhakhtarka jirka ayaa daaweyn kara muruq xanuun, murqo culus.
Daaweynta xanuunka loo yaqaan 'Chiropractic' iyo daaweynta wadajirka ah
Wadajirka iyo daaweynta jireed waxay yareyn karaan murqaha iyo xanuunka laabatada. Dhakhtarka casriga ah ee loo yaqaan 'chiropractor' wuxuu daaweeyaa murqaha iyo kala-goysyada, sidoo kale, sidoo kale xiriiriyaha koowaad, waxay ka caawin karaan wixii gudbin ah ama wixii lamid ah.
Saameyn dhexdhexaad ah ayaa laga dareemaa astaamaha fibromyalgia. Saameyntu waa ka yar tahay haddii kaliya loo adeegsado daaweynta garashada oo keliya, laakiin leh saameyn aad u badan haddii la isku daro daaweynta kale.
Duugista iyo daaweynta jirka
Shaqada muruqyada iyo duugista waxay yeelan karaan astaamo yareeye astaamaha muruqyada ciriiriga iyo xanuunka leh. Waxay kordhisaa wareegga dhiigga ee meelaha muruqyada ku xanuunaya waxayna ku milmaan fiilooyin murqaha oo adag - waxay sidoo kale kaa caawin kartaa ka saarida garaaca iyo wixii la mid ah.
Cirbadda daaweynta / acupuncture
Daaweynta acupuncture iyo daweynta cirbadaha ayaa muujiyey saameyn togan xagga daaweynta iyo xannuunka loo yaqaan 'fibromyalgia'.
Farsamooyinka neefsashada ee habboon iyo jimicsiyo neefsasho Kaasoo yareyn kara walaaca iyo walbahaarka ayaa kaa caawin kara yareynta calaamadaha.
Jimicsi / jimicsi loogu talagalay dadka qaba fibromyalgia
Jimicsi ku habboon iyo jimicsi ayaa hagaajin kara qaab dhismeedka jirka qofka iyo hurdada. Waxay sidoo kale la xiriirtay hoos u dhaca xanuunka iyo daalka. Daraasadaha ayaa muujiyey in tababarka wadnaha iyo jimicsiga jimicsiga gaar ahaan ay u muuqdaan kuwa ugu waxtarka badan kuwa ay saameeyeen fibromyalgia. Hoos waxaa ku yaal tusaale ah barnaamij tababar:
VIDEO: 5 Jimicsi Dhaqdhaqaaq oo loogu talagalay Kuwa Fibromyalgia leh
Halkan waxaad ku arkeysaa shan jimicsi dhaqdhaqaaq oo wanaagsan oo loogu talagalay kuwa qaba fibromyalgia. Kuwani waxay kaa caawin karaan inaad yareyso murqaha murqaha iyo kalagoysyada adag. Hoos guji si aad u aragto.
Ku soo biir qoyskeena oo iska qor kanaalkeena (halkan guji) - oo raac boggeena FB si maalinle ah, talooyin caafimaad oo bilaash ah iyo barnaamijyo jimicsi oo kaa caawin kara xitaa caafimaadka wanaagsan.
Biyo diirran / barkad dabaal
Tababbarka biyaha kulul / barkadda ayaa muujisay inay waxtar badan yeelan karto marka ay timaaddo calaamadaha gargaarka iyo hagaajinta shaqada - tani waa gaar ahaan sababta oo ah waxay isku daraysaa tababarka wadnaha iyo tababarka iska caabbinta.
Sidoo kale aqri: - 3 Jimicsi oo neefsasho qoto dheer leh oo ka dhan ah diiqada
Sideen ugu ilaalin karaa cudurka fibromyalgia?
- Ku noolaatid caafimaad oo si joogto ah jimicsi u samee (xadkaaga gudihiisa)
- Caafimaad raadsada oo iska ilaali walwalka nolol maalmeedka
- Joog qaabdhis jireed wanaagsan leh barnaamijyo jimicsi oo ku habboon dadka qaba fibromyalgia
- LDN (nadarroxen qaddarka hooseeya)
Muuqaalka waxaa soo aruuriyey CureTogether waxayna muujineysaa dulmar guud oo ku saabsan daweynta iyo wax ku oolnimada laga soo sheegay daaweynta fibromyalgia. Sida aan aragno, dhibcaha LDN aad ayuu u sarreeyaa.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: 7 Siyaabaha LDN ayaa Caawin Kara Kahortaga Fibromyalgia
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto warbaahinta bulshada
Mar labaad, waxaan rabnaa si fiican u waydii si aad ula wadaagto maqaalkan warbaahinta bulshada ama bartaada (fadlan si toos ah ugu xir qormada). Fahmitaanka iyo xoojinta diiradda ayaa ah tillaabooyinka ugu horreeya ee nolol maalmeedka wanaagsan loogu talagalay dadka ay saameeyeen xannuunka dabadheeraadka, laabotooyinka iyo fibromyalgia.
Waa tan sida aad uga caawin karto la-dagaallanka xanuunka daba-dheeraada oo aad u taageerto:
Xulashada A: Si toos ah ugu wadaag FB - Nuqul websaydhka cinwaanka oo ku dheji boggaaga facebook ama koox facebook ah oo aad xubin ka tahay. Ama, riix batoonka "wadaag" ee hoosta si aad boostada ugula wadaagtid bartaada facebook.
Taabo taabashadaan si aad ula sii wadaagtid. Aad ayaan kuugu mahadnaqayaa qof kasta oo gacan ka geysta kor u qaadista fahamka fibromyalgia iyo ogaanshaha xanuunka dabadheeraad!
Xulashada B: Toos ugu xariir maqaalka bartaada ama bartaada internetka.
Xulashada C: Raac oo isu dhig Boggayaga Facebook
PAGE xiga: - 18-kan dhibcood ee muruqyada ee xanuunka leh ayaa sheegi kara haddii aad qabtid Fibromyalgia
Guji halka kore si aad ugu gudubto bogga xiga.
Robert S. Katz, MD, iyo Joel A. Block, MD. Fibromyalgia: Cusboonaysiinta Farsamooyinka iyo Maareynta. Journal of Rheumatology Clinical: Volume 13 (2) Abriil 2007pp 102-109
Sawirada: Creative Commons 2.0, Wikimedia, WikiFoundry
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Fibromyalgia:
Xor baad u tahay inaad adeegsato sanduuqa faallada ee hoose haddii aad wax su'aalo ah ama ra'yi ah qabtid.
(Waxaan isku dayeynaa inaan uga jawaabno dhammaan fariimaha iyo su'aalaha 24-48 saacadood gudahood. Waxaan kaloo kaa caawin karnaa inaad tarjunto jawaabaha MRI iyo wixii la mid ah. Haddii kale, si xor ah ugu yeer asxaabtaada iyo qoyskaaga inay jecel yihiin boggeena Facebook - oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo iyadoo la siinayo talo caafimaad oo wanaagsan, layliyo iyo sharraxaadda ogaanshaha cudurka.)
Elsa wuxuu leeyahay,
Ma jiraa qof baadhay sababta haween badan oo uur leh u sheegaan in calaamadaha Fibromyalgia ay ku dhow yihiin inay tagaan marka ay uurka leeyihiin iyo wakhtiga ka dib marka si buuxda loo nuujiyo? Waxaan jeclaan lahaa in aan uur yeesho 5 bilood sanadka intiisa kale ..?
Hilde Teigen wuxuu leeyahay,
Waxa kale oo aan tan la kulmay intii aan uurka lahaa. Waxaan jeclaan lahaa inaad si joogto ah uur yeelato ☺️
Katrine wuxuu leeyahay,
Hi Elsa. Jawaab yar oo soo daahday, laakiin hormoonka aan dumarku soo saarno xilliga uurka waa xanuunka yareeya. Waxaan galay hoormoonka hcg dhowr sano ka hor waxaana la kulmay xanuun joojin iyo tamar korodhay. Cilmi baaris ayaa lagu sameeyay dibadda hcg sida xanuunka baabi'iyaha, laakiin tani maaha wax Norway laga isticmaalo.
Elisabeth wuxuu leeyahay,
Hi ku dhibo fibromyalgia, dheef-shiid kiimikaad hooseeya iyo endometriosis, ma jiraa xidhiidh ka dhexeeya saddexdan? Waxaan ku leeyahay soo-dhac xagga dhabarka hoose ah, waxaan ku helay isla markii aan ka saaray lafta dabada. Waxaan la halgamayay sanado badan lumbago oo waxaan dareemay in jimicsigu uu ku dhawaaday inuu iga walwalo tan iyo markii aan xanuunsaday ka dib.
Sawirada la qaaday sanado badan ka hor ayaa muujinayay xirashada gacmaha iyo sinta Lafopractor-ka iyo akupunkturist-kayga ayaa marar badan hoos u dhigay in ay ka shakiyeen in aan qabo hernia, laakiin ma saameynin baaritaanadii aan sameeyay dhowr sano ka hor - maxaad u maleyneysaa inaan dalban karo baaritaannada? Way adagtahay in lagu raaxaysto nolosha xanuunkan maalinlaha ah ee weyn.
Ilaa 30% kuwa leh dheef-shiid kiimikaad hooseeya ayaa sidoo kale laga helaa fibromyalgia - markaa waxaa jira xiriir gaar ah, laakiin xiriirkan si fiican looma fahmin weli.
1) Waxaad qortaa in lagaa saaray lafta dabada?! Maxaad uga jeeddaa?
2) Goorma ayaa kugu soo dhacay dhabarka hoose? Miyay dib u laabatay tan iyo markii ugu horeysay?
3) Ma isku dayday tababar gaar ah? Xaqiiqda ah in ay dhaawacdo murqaha ayaa calaamad u ah in muruqyada aysan ku filneyn culeyska - ka dibna markaad istaagto oo aad ku socoto nolol maalmeedka, waxaad sidoo kale ku xanuuneysaa taas (oo ay ku jirto lumbago). Sida kaliya ee looga fogaan karo xanuunka dhabarka hooseeya waa in muruqyada taageerada ay ka xoog badan yihiin culeyska - markaa halkan waxaad u baahan tahay inaad hesho qaabab jimicsi la waafajiyay si aad tartiib tartiib u sii xoogeysato. Ku bilow xoogaa hooseeya oo hiigsi sare. Waxay u badan tahay inay qaadato dhowr bilood ka hor intaadan ku guuleysan inaad naftaada dhisto ilaa heer aad u wanaagsan.
Fadlan jawaabi jawaabahaaga. Waad ku mahadsan tahay horay.
Ellen-Marie Holgersen wuxuu leeyahay,
Cilmi-baarista dadka qaba fibromyalgia miyay sidoo kale khuseysaa dadka qaba xanuunka murqaha ee daba-dheeraada? Markaa waxaan ula jeedaa cilmi baadhis muujinaysa khaladaadka isku xidhan ee maskaxda Xanuunka dareenka ee ku dhaca bukaanka fibromyalgia.
Ellen Marie Holgersen
Nicole v / vondt.net wuxuu leeyahay,
Daraasadani waxba kama odhanayso - markaa nasiib darro garan mayno.
Bente M wuxuu leeyahay,
Haye waan la kulmay kan hadda. Waxaan qabaa su'aal dad badan dhibaysa. Maxaynu wax u ilaawnaa… xasuus gaaban Maxaan u iloobi karnaa erayada? maxaa naloo baari waayay maskaxda ama dhabarka? Waa in meel lagu tuso. Hooyo sanado badan ayay qabtaa Fibro waxayna la dhibtoonaysaa xusuusta ay hadda ku sameeyeen baaritaanka laf dhabarta. Markaa waxaan la yaabanahay dhammaan kuwa qaba Fibromyalgia waxay leeyihiin wax la mid ah. Waxaan ka baqayaa cudurkan.
Jon wuxuu leeyahay,
Haa, waan hayaa oo hooyaday oo 86 jir ah ayaa iyaduna haysata. Waa wax yar oo dhibsado mararka qaarkood, laakiin kaftan yar si fiican ayey u socotaa. 😉
Smuna wuxuu leeyahay,
Cadaadiska / walbahaarka oksaydhka, bararka joogtada ah iyo tayada hurdo xumada waxay si xun u saameyn kartaa maskaxda. Marka ay timaado hurdada, qofku wuu seexan karaa habeenkii oo dhan, laakiin weli ma haysto hurdo qoto dheer oo wanaagsan oo muhiim u ah xusuusta iyo feejignaanta.
Lolita wuxuu leeyahay,
Waxaasoo dhan waa run. Waxaan tagay dhowr takhaatiirta jimicsiga jirka qofna ma rabo inuu i siiyo duugisyo iga dabcinaya murqahayga. Kaliya waxay ku siin doonaan macluumaadka ku saabsan tababarka.
Lisa wuxuu leeyahay,
Hi. Ma garanayo meel aad ku waydiiso su'aasha - markaa waxaan isku dayaa halkan. Waxa uu ka shaqeeyaa dugsiga barbaarinta oo uu qoorta ka xanuunay ilaa 1 sano. Laga bilaabo cudurka crystal (ayuu yiri dhakhtarka - lafopractor sheegay in ay ka timid qoorta). Hadda waxaan ku jiray fasax jirro ilaa dhammaadkii Janaayo. U aaday lafopractor, laakiin dareemay in ay ka caawisay inta ugu badan halkaas ka dibna - hadda aado physio. Waxaan tagay MRI iyo raajada. Natiijadu waxay ahayd: Kor u kaca disc ee heerarka C5 / C6 iyo C6 / C7, oo lagu daray nooca Modic 1 daboolka falcelinta saxanka ee bidixda iyo sidoo kale wax yar oo kordhay dabacsanaanta disc iyo kaydyo waaweyn oo aan daboolnayn kuwaas oo siinaya stenoses foramen ee bidix C6 iyo C7 xidid. Ma laha stenosis laf dhabarta ama myelomalasia. Waxay ku daraysaa in xanuun badan madaxa igaga jiro. (Dabadeedna waxay inta badan ku saabsan tahay inay si habboon u dharbaaxdo markaan dhaqaaqo oo aan socdo). Waxa uu ahaa physio shalay. Wax badan kama odhan natiijada, laakiin wuxuu yidhi waa inaan qoorkayga yara fidiya oo aan sii ordayaa (taasoo si fiican u socota). Waxa uu sidoo kale sheegay in Modic la xaqiijiyay, laakiin cilmi-baarayaashu waxay isku khilaafeen in la isticmaalo antibiyootiga iyo in kale. Waxa aan la yaabanahay waa Modic - wax yar baan ka akhriyay marka ay timaado laf dhabarta lafaha - ma la mid tahay qoorta? Ogaysii in dadka igu xeerani aanay u malaynayn in qoortu iga xanuunayso lagana yaabo in aan wax badan sameeyo. Waxaan haystaa maalmo wanaagsan, laakiin waxay qaadataa wax aad u yar ka hor intaysan mar kale xanuunin. Nooca Modic ma yahay wax la lumin karo? Waxaan ka baqayaa in aan fasax jirro ku maqnaado muddo dheer.